फिचर Archives - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
अनि वीपी देशकै पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने…
जगत नेपाल अनशनकोे २४औं दिन बीपी बेहोस भए । सिद्धिमणिसहित तीन जना डाक्टरको टोलीद्दढले जाँच गरी अब पनि अनशन जारी राखे नबाँच्ने रिपोर्ट दिएपछि राणा सरकारले राति स्ट्रेचरमा राखेर उनलाई परिवारको जिम्मा लगाउन खोज्यो । ब्रह्महत्याको डरले मोहन शमशेर आत्तिएका...
बाँदर र कुकुरको मित्रता देख्दा स्वयम्भु पुग्ने चकित (फोटो फिचर)
सामान्यतया कुकुर र बाँदर मिल्ने प्राणी होइनन् । बाँदर देख्ने बित्तिकै कुकुरले झम्टने गरेको त तपाई हामीले देखेकै कुरा हो । त्यस्तै उस्तै ताल परे बाँदर पनि कुकुर माथि जाइलाग्न बेर लगाउँदैन । तर स्वयम्भूमा कुकुर र बाँदरको एउटा जोडी...
जुवा खेलेर एकलाख जितेपछि बनाएकाे ‘गार्डेन अफ ड्रिम्स’
काठमाडाै, २२ कात्तिक । चारैतिर मानिसको भीडभाड छ। कोही हातमा मोबाइल, क्यामेरा लिएर सुन्दर दृश्यहरु कैद गर्न व्यस्त छन् त कोही मनोरम दृश्यावलोकन गरिरहेका। लाग्छ, शान्त वातावरणले सबैको मनमा उमंग छरेको छ। सबैको मुहारमा खुसी फुलिरहेको छ, जसरी त्यहाँ अनेकथरी...
यी ४ राशिका अघि किन अरु राशि किन कमजोर हुन्छन ?
ज्योतिषी अनुसार जति पनि राशि छन् ती सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । तर, त्यसमध्ये पनि ४ वटा राशि यस्ता छन्, जो वास्तवमै धेरै बलिया हुन्छन् । यी राशिहरु यती बलवान हुन्छन् की, त्यहाँ अरुले दबिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मेष...
बौद्ध धर्मावलम्वीलाई विजयादशमी के हो ?
असत्यमाथि सत्यको विजय अर्थात आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको खुशियालीमा मनाइदै आएको दशैं अर्थात विजयादशमीको उल्लासमय वातावरण छाइसकेको छ । घटस्थापनाका दिन घरघरमा जमरा राख्दै सुरु भएको बडा दशै नेपाल भित्र मनाइने चाडपर्वमध्ये सबैभन्दा बढि जनसहभागिता हुने र सबै भागमा...
सरकारले पार्टी चलाउने होइन
२०७५ मंसिर २५ मंगलवार
आगामी पुसमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा पाँच सय ५० जनालाई जागिर
अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि ईपेमेन्ट सेवा
नक्कली लाइसेन्स बनाएर ठगी गर्ने पोखराबाट पक्राउ
निर्मला पन्त प्रकरण: अर्का निर्दाेषलाई फसाउन लागे आईजीपी नै, सरकारी षड्यन्त्रको ठूलो पर्दाफास !
२०७५ मंसिर २३ आइतवार
मेसीका बालक फ्यानलाई टुक्रा टुक्रा पर्ने तालिबानको धम्की
अमेरिकि क्यालेन्डरमा नेपाली सुन्दरीकाे तस्बिर
२०७५ मंसिर २१ शुक्रवार